Guddiga Doorashooyinka: Nooma muuqato ifafaale ay Soomaaliya uga dhici karto “Doorasho Qof iyo Cod” ah – Kalfadhi
Guddiga Doorashooyinka: Nooma muuqato ifafaale ay Soomaaliya uga dhici karto “Doorasho Qof iyo Cod” ah
March 9, 2019 March 9, 2019 Kalfadhi
Guddiga Doorashooyinka Soomaaliya ayaa sheegay in aysan Soomaaliya Doorasho Qof iyo Cod ah ka dhici karin 2020-ka. Guddoomiyaha Guddigaas Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yarey) ayaa, iyada oo la hadleysa Axsaabta Siyaasadda ee ay diiwaan-geliyeen, waxay hortooda uga sheegtay in aysan u muuqan iney u diyaarsan yihiin in ay doorasho galaan, marka dowladda hadda jirta uu waqtiga ka sii dhamaanayo.
“Run ahaantii, nooma muuqato ifafaale xisbi uu isu diyaarinaayo doorasho” ayey tiri Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka, Xaliima Yarey oo laba maalin ka hor ka hadleysay kulan loogu magac daray “Is Xog Wareysi”, oo ay yeesheen Guddigeeda iyo Axsaabta Ku-meel-gaarka ah ee Siyaasadda. “Waxaa noo muuqata ifafaale ah in shahaado uu qaato, uuna yiraa Xisbi ayaan ahay, meeshaasna uu ka bilaabo borobagaandada (dacaayadda) kaambeynka (ololaha)” ayey hadalkeeda sii raacisay.
Waxay sheegtay in ololo sameysashada axsaabta qaar ee hadda ay tahay sharci darro, waxayna sheegtay in ay jiraan arrima badan oo sharciya oo ka horeeya inuu xisbi sameysto olole, taas oo ay sheegtay in aysan hadda soo dhaweyn. “Waxaa la rabaa xisbigu inuu is dhiso, siduu isku dhisaayo, siduu u shaqeynaayo iyo waxa laga rabana waxaa ka yaala Sharciga Doorashooyinka” ayey tiri Guddoomiye Xaliima Yarey.
Iyada oo la talineysa, wacyigelineysana hogaamiyayaasha iyo xubnaha axsaabta siyaasadda ee ay la hadleysay, ayey sheegtay iney muhiim tahay in masuuliyad la qaato, si xisbinimada la sheeganayo ay sharciga ugu taagnaato. “Xisbi waxa uu (xisbi) yahay markii laga shaqeeyo – tilaabo tilaabo, ilaa uu ka gaaro maalinta uu codka bixinaayo, oo uu meeshaas codka lagu bixinaayo ee uu wakiilka geysanaayo uu la socdo, anaguna aan daba joogno’ ayey tiri Xaliima Yarey.
Haddii aysan sidaas dhicin ayey sheegtay in aysan Soomaaliya gaari doonin doorashada qof iyo codka ah ee ay ku riyooto, sida ay hadalka u dhigtay, waxayna sheegtay in ay taasi ka faa’iideysan doonaan dadka diidan in ay dhacdo doorasho ay shacabku galaan. Waxayna, saasdaraadeed, tilmaantay in nidaamka hadda jira (Federaalka) uu yahay magac u yaal, uusana sii shaqeyn karin.
“Dowlad Federaal sheegatay, oo haddana doorasho galeynin ee soo taaganee, qabiil, oday iyo wax aan jirin iyo laaluush xildhibaan ku noqonaaya dowlad ma aha, doorashana ma aha, federaalna ma aha” ayey tiri Xaliima Yarey. “Yaawaaye marka cidda tiri (masuuliyaddaasna qaadday) anagaa arrintaas baabi’ineyna”? ayey isweydiisay Xaliima Yarey, waxayna sii raacisay “waa adinka – adinkana ifafaalaheedii idinkama muuqdo – laba sanaa la joogaayee”.
Dowladda oo isu diyaarineysa iney “Aas Qaran” u sameyso Wasiirkii Dastuurka Soomaaliya
Musharraxiin ku baaqay in degdeg loo sameeyo Hab-raaca Doorashada Jubbaland